Krema epinara | ThermoRecipes
menaka22 minitraOlona 4175 kaloria
Tena tiako ity fomba fahandro ity satria ny rafozam-baviko no nanao azy betsaka ary rehefa nanandrana azy aho tamin'ny voalohany dia tiako izany! Ny anaran'i krema epinara Angamba tsy dia manintona loatra izany, saingy manome toky anao aho fa mahatalanjona ny tsiro. Ary ny ampahany tsara indrindra, dia ho faly ny ankizy hihinana azy. Izany dia maivana, mahavelona ary tena tsotra ny miomana.
Ho hitanao ny fifandraisan'ity crème ity amin'ny fihinanana anao. Ary io fikasihana io dia omen'ny béchamel hazavana izay hataonay miorina amin'ny menaka oliva (mba ho maivana kokoa noho ny amin'ny dibera) sy ronono semi-skim.
1 Krema epinara béchamel
Krema epinara miaraka amin'ny saosy béchamel, miaraka amina endrika sy tsiro mahagaga. Sakafo mahavelona sy tsotra mba hiomanana amin'ny olona manaraka sakafo ambany kaloria sy ho an'ny ankizy.
Spinach mangatsiaka 300 g
Fehiloha tongolo gasy 4
Menaka oliva 50 g (azo soloina margarine na dibera)
1000 g ronono semi-skimmed (azo ampiasaina manontolo na skimmed)
Katsaka katsaka 50 g (azo ampiasaina ny lafarinina varimbazaha mahazatra)
Apetrakay ao anaty vera sy programa ilay menaka 2 minitra, maripana varoma, hafainganana sotro.
Ampio ny vovo-katsaka ary andrahoy 2 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Ampio ny ronono, epinara, tongolo gasy, sira, dipoavatra ary nutmeg. Izahay dia manao fandaharana 20 minitra, maripana 90º, hafainganam-pandeha 4.
Izahay dia manamarina ny toerana misy ny sira sy ny fanosehana. Raha aleontsika dia afaka manamboatra programa 30 segondra isika, hafainganana mandroso 5-7-10 ka lasa lasa bebe kokoa.
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Tsy mahazaka atody, Resipeo ho an'ny ankizy, fitondrana, Lasopy sy menaka, tsy mihinan-kena
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Recipe manokana » Tsy mahazaka atody » Krema epinara béchamel
Mametraka mangatsiaka ve ny epinara sa manetaka azy voalohany?
Salama Mercedes, mangatsiaka mahitsy 😉
Salama! Mamy be ilay izy ... tsy maintsy ataoko! ! Ny fanontaniana mipetraka dia ny momba ny epinara mangatsiaka. Mividy ireo mercadona tonga toy ny taco roa aho. Azoko an-tsaina fa ireo dia tsy ho afaka mametraka azy ireo mivantana tsy misy defrosting satria mitovy ihany ny zavatra andoavako zavatra, sa tsy izany ??
Mamelà ny fisalasalana fa kely fotsiny ny thermo ananako.
Misaotra anao! !
Salama Sandra, raha sendra misy sakana iray dia tsara kokoa ny manalefaka azy ireo amin'ny hafanan'ny efitrano na amin'ny microwave mba hahafahanao manapaka kely ilay sakana kely. Raha ataonao ao anatiny dia elaela vao hatao (aza manahy fa tsy hisy hanimba, tsy simba ny masininay !!). Azonao lazaina amiko ve ny vokany? Famihinana !! Oh ary anontanio izay rehetra ilainao, dia izany no nianarantsika rehetra 🙂
Krema tena tsara dia mivoaka, nahenako antsasaky ny haben'ny tongolo lay, averina aho.
Salama Sonia, afaka manandrana amin'ny manaraka miaraka amin'ny tongolo lay ianao amin'ny manaraka satria rehefa masaka dia malefaka be dia ho hitanao! Faly be aho fa tianao izany. Oroka sy fisaorana noho ny nanoratany anay 😉
Nataoko toy ny misy azy io, ary tianay izany. Ny fikasihan'ity crème ity, ho an'ny tsiriko, dia tongolo lay. Tsy dia matanjaka izy io ary manome tsiro manokana azy. Haveriko marimarina izany. Misaotra
Vero tsara ô! Ny tongolo lay, rehefa masaka dia tsy matanjaka mihintsy. Faly aho fa tianao izany. Misaotra nanoratra taminay! Oroka 🙂
Salama, tiako ny manandrana an'ity recette ity ... miaraka amin'ny thermomix 21 dia mitovy ve izany? Indraindray ve ireo vokatra mangatsiaka ao amin'ny thermomix ahy dia miafara amin'ny fanondrahana ny valiny ...
Eny ary, miovaova ny mari-pana hampihena azy hatramin'ny 90 na 100 heveriko ...
Nametraka ny latabatra fitoviana amin'ny TM21 fotsiny aho tamin'ny faran'ny resipe 🙂 Matokia, satria amin'ny maha-crème ahy azy, ny epinara mangatsiaka dia tsy hanova ny valin'ny resipeo. Manantena aho fa tianao izany!
Azo atao amin'ny epinara tsy misy vaovao ve...??
Eve mazava ho azy!! Ho matsiro koa 🙂 misaotra nanoratra taminay!
Voalohany indrindra… ..arahaba ao amin'ny bilaoginao! Fahafinaretana ny mahandro sy manana ny fanampian'ny olona toa anao! Miarahaba anao!
Te hanontany aho raha efa nanandrana ny fomba fahandro tamin'ny epinara vaovao sy nandrahoina. Tiako ny mividy legioma vaovao ary raha azo atao organika ... saingy tsy tiako hamboarina izany, amin'ity tranga ity, ny vokatr'ity fomba fahandro ity.
Valiny amin'ny GEMMA
Misaotra betsaka anao Gemma tamin'ny fanarahana anay sy ny fanomanana ny resinay. Azonao atao amin'ny epinara vaovao izy io nefa tsy misy olana. Tsy mila ampangotrahinao mialoha izy ireo, satria handrahoana ny ronono mandritra ny fandrahoan-tsakafo. Raha efa nahandro azy ireo ianao dia ahenao ny fahandro 20 minitra avy amin'ny teboka 3 ka hatramin'ny 10 minitra. Matokia fa ny valin'ny fomba fahandro dia tsy hivily lalana na kely aza. Manantena aho fa tianao izany! Holazainao amiko. Famihinana 🙂
Te hiarahaba anao amin'ny bilaogy koa aho, voafatotra mafy aho! Ary mbola tsy nahandro sy nanandrana nanandrana zava-baovao tamin'ny valiny mahavariana velively ny nahandro tamin'ny thermomix nataoko, misaotra betsaka
Ny fanontaniako dia mifandraika amin'i Gemma's, raha misy epinara vaovao (avy amin'ny zaridainan'ny tanànantsika ????) mitovy ny habetsany, 300 grama?
Salama Maribel, miaraka amin'ny spinach voajanahary 200-250 g dia ampy ianao 🙂
Misaotra betsaka amin'ny hafatrao, faly izahay fa tianao izany ary manaraka anay isan'andro. Raha tsy teo ianao dia tsy nisy dikany ity bilaogy ity! Dia misaotra indrindra. Famihinana.
Salama Irene tiako ho fantatra raha apetrako ny antsasaky ny akora ilaina hametrahako fotoana kely kokoa noho ny arahabaona
Tsy hampihena ny fotoana be loatra aho. Hametraka segondra vitsy aho amin'ny dingana voalohany ary avy eo 15-16 minitra fa tsy 20.
Manantena izahay fa tianao io 😉
Tena manankarena tokoa ny tsiro. Nataoko tamin'ny epinara voajanahary manta mivantana sy lafarinina fa tsy katsaka. Ny lafy ratsy dia izy ireo dia tena matevina, toy ny bechamel mihoatra ny crème, matevina loatra. Manontany tena aho raha sanatria simbaina ny mizana Thermomix ary nilanja ratsy ny lafarinina ... napetrako tamin'ny antsasaky ny ronono ny litatra, 1 litatra ... efa nisy olona ve?
Angamba ny olana dia ny fampiasana lafarinina fa tsy vovo-katsaka, izay mihalehibe kokoa. Na izany aza, azonao atao ny manampy ronono na rano bebe kokoa hanamaivana izany araka ny itiavanao azy. Misaotra nanoratra taminay! Famihinana 🙂
Ataoko izao, manana ny tm5 aho. Raha ny amiko, amin'ny dingana faha-3 raha milaza ny hafainganana 4 dia tsy azo atao izany, satria mihetsika be dia be izy ary mivoaka, noho izany dia ao amin'ny hafainganana 3 isika
Salama Natividad, amin'izao fotoana izao dia namboarina ho an'ny TM31 ny resinay, noho izany dia mankasitraka indrindra izahay fa nizara ny fampifanarahana nataonao tamin'ny TM5 ianao. Tianao ilay crème? Manantena aho fa 😉 Famihina sy fisaorana noho ny fanoratana ho anay.
ny tsiro eny, be dia be nefa be loatra ny tsiriko. MISAOTRA
Toy izany koa no nitranga tamiko, amin'ny hafainganam-pandeha 4 mihetsika be ilay masinina ary mivoaka ny ronono.
Salama Eva, andramo ahena ho hafainganam-pandeha 3 sy fikosehana raha vantany vao vita ny fandrahoana 20 min. Misaotra nanoratra taminay!
Toy izany koa no nanjo ahy (isa 3 raha milaza izy fa tsy azo atao ny hafainganam-pandeha 4) miaraka amin'ny lafarinina sy epinara voajanahary.
Ny tokony hataonao dia ny mitazona azy mafy amin'ny fanindriana ary hametraka ny hafainganam-pandeha 7, aorian'ny 5/10 segondra dia tsy misy mihetsika intsony ary azonao avela eo amin'ny hafainganam-pandeha 7 mangina izy io raha tadiavinao fa tena be ranony na ambany araka izay itiavanao azy.
Ho an'i Natividad,
Misaotra tamin'ny fandraisanao anjara Gonzalo. Mampiasa ny TM5 koa ve ianao? Mahafinaritra ny manana bilaogy hizarana ny hafetsen'ny tsirairay 😛 Misaotra anao nandray anjara !!
Ary ho antsika izay tsy manana thermomix? ??
Salama Alba, tsotra be. Voalohany dia manao béchamel ianao ary avy eo dia manampy ny ambiny amin'ireo akora. Akoraho tsara ianao mba tsy hijanona eo ambany. Avelao izy hahandro mandritra ny 20 minitra ary afangaro amin'ny blender. Mirary ny soa indrindra.
Nolazain'izy ireo taminay fotsiny fa ny zanako lahy 5 taona dia somary tsy mahazaka ronono sy atody ka nalain'izy ireo vetivety taminy izany ary mila mampifanaraka izahay. Te hahafantatra aho raha tsara raha manova ronono ho an'ny ron-kena aho ary raha mitovy ny habetsany
Salama Ana, mety ho tsara tokoa izy io ary soloina ron-kena legioma na akoho iray ihany, fa azonao atao koa ny mampiasa ronono soja na amandy, azo antoka fa matsiro !! Etsy an-danin'izany, manasa anao izahay hitsidika ny fizarana tsy zakanay raha sendra mahita hevitra mahaliana ianao hanomanana ny zanakao.
- Tsy fahazakana laktose: http://www.thermorecetas.com/recetas-thermomix/intolerantes-a-la-lactosa/
- Tsy fahazakana atody: http://www.thermorecetas.com/recetas-thermomix/intolerantes-al-huevo/
Misaotra nanoratra taminay !! Famihina lehibe ho anao roa 🙂
Azoko antoka fa hahazo resipeo be dia be izay mety ho tiany aho. Misaotra anao arivo?
Heveriko fa mitovy, satria ny tm5 hafainganana 4 dia be loatra. Eo am-panomanana ny fomba fahandro amin'izao fotoana izao aho, nanitsy ity dingana ity tamin'ny hafainganam-pandeha 3.
Ny fomba fahandro dia manana lesoka maro. Manomboka amin'ny orinasa "mangatsiaka". Nanome sambo ny milina taloha ary ankehitriny dia mangataka ny fandranitra lelany. Ronono iray litatra? Ny thermomix dia eo an-tampony. Iza no mametraka hafainganam-pandeha ambony amin'ireo fepetra ireo? Ary miaraka amin'ny voan-katsaka ianao dia mihoa-pefy. Andeha hojerentsika ny fomba handaminana ny korontana!
Vao nanao izany tamin'ny tm31 aho. Miaraka amin'ny epinara sy lafarinina vaovao. Tsy azonao atao ny mampihena ny ora 10 min na dia vaovao aza ny epinara satria manta ny tongolo lay ary be loatra ny crème. Amin'ny 20 min dia tonga lafatra izy io. Ary tsy maintsy naparitako ilay izy avy eo satria tsy afaka natao taloha. Nandeha be loatra izy io ary nivoaka avy tao anaty vavahady ilay ronono. Misaotra ny recette!
Salama Rosa, taiza no hitanao fa maharitra 10 minitra ny fandrahoana sakafo? Ao amin'ny teboka faha-3, izay ampiana ny tongolo lay sy epinara, noresahiny 20 minitra. Nandritra ny 10 taona mahery no nanaovako an'ity recette ity ary tonga lafatra amin'ny modely TM rehetra. Angamba raha nampiasa epinara vaovao ianao, ny habetsaky ny fonenan'izy ireo ao anaty vera dia lehibe kokoa ary amin'ny voalohany dia mila mihazona ny kaopy amin'ny tananao ianao mandritra ny 10 segondra voalohany izay mihodina ... fa avy eo ny milina dia tokony ho afaka tantano bebe kokoa noho ny ampy ... raha tsy izany Angamba ny masinina manana zavatra tsy mety ary tokony hitondra azy any amin'ny serivisy teknika ianao. Misaotra anao nanoratra taminay !! Faly aho fa tianao ilay izy 🙂
Mary Catherine dia hoy izy:
Salama salama, nanao ny crème epinara aho ary nivoaka somary navoakako kely, inona no azoko atao !!! ??
Valiny tamin'i Maria Catalina
Yaourt maivana sy crème de pear